Posted by ကို Tranquillus | အောက်တိုဘာ 21, 2020 | web ပေါ်မှာ
Si vous débutez sur LinkedIn ou si vous souhaitez être plus à l’aise sur ce réseau socio-professionnel, cette formation est pour vous. Avec Grégory Mancel, consultant en stratégie digitale, vous ferez le tour des fonctionnalités essentielles et des paramètres de gestion de compte et de confidentialité. Vous verrez comment créer, compléter et optimiser votre profil afin que l’on vous trouve plus facilement sur les moteurs de recherche. Vous prendrez également en main des outils performants pour développer un réseau de qualité, effectuer une veille efficace, prospecter, générer de l’engagement et publier avec pertinence sur LinkedIn.
Linkedin Learning သင်တန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကိုငွေပေးချေပြီးနောက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်မတွန့်ဆုတ်ပါကစိတ်မပျက်ပါ။ သင်ပိုမိုလိုအပ်ပါကရက် ၃၀ ကြေးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အရုံးတင်စစ်ဆေးကာလပြီးနောက်ဆုတ်ခွာမရသေချာသည်။ တစ်လနှင့်အမျှသင်သည်များစွာသောအကြောင်းအရာများအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို update လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
မူရင်းဆိုက် → ဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
LinkedIn ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဒီဇင်ဘာလ 12, 2020Tranquillus
ဖတ်ရန် တိုးတက်မှုနှုန်း hacking ၏အုတ်မြစ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကြောင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
သင်၏ CV ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမည်သို့ရေးနိုင်သနည်း။
သင်္ချာစုစည်းမှု- 1- ဆင်းသက်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လေ့လာခြင်း။